Indlela To Nabahlobo In Strange New Amalungu Of The World | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Indlela To Nabahlobo In Strange New Amalungu Of The World
Ukuya iindawo ezahlukeneyo zehlabathi kuphela banokuba amava ukukhanya yaye inika umdla. Nokuba into uyenze lonke ixesha, okanye kanye uhambo ebomini ukwandisa zexa elizayo zakho, Iindawo ezinika umdla uyakwazi ukutshintsha ubomi bakho.
Abantu abaninzi kule mihla bakhetha ukuhamba yedwa, akukhuthazwa inkululeko enjalo amava linikeza. LifeHack ichaza isizathu sokuba iye yaba indlela enjalo ngazo ukubona ihlabathi kwiminyaka yakutshanje.
Ukuba wenza zokuhamba wedwa, yinxalenye Adventure bedibana nabantu abatsha, ngokufuthi abo ohluke kakhulu kuwe, kodwa bonke abo ngethemba ityetyiswe le adventure zokuhamba jikelele.
ke, makhe sihlolisise ezinye iindlela ezahlukeneyo uyakwazi ukuhlangabezana abantu kwiindawo ezintsha zehlabathi.
Nangona azi- isigqibo ezicacileyo, the Guardian icebisa ukuba xa zisiwa ubabalwe millennials. umculo Live kuya kude ethandwa kakhulu, ngexesha phakathi iiseti ukuva wena ucinga ukuba benze nabazana ezintsha.
Zininzi imivalo ezinkulu hip lonke elaseYurophu labo abakufunayo ukuba bahamba-hambe uLizo Paris, Laksembheg, ne London, yonke iphelele lokufezekisa umntu omtsha olandelayo adventure yakho.
Idlala poker kuyinto indlela kakhulu ukudibana nabantu abatsha, njengokuba wena kwitafile efuna ukuqonda njengotshaba. Ufunda nabo, bahlekisa nabo imixokelelwane ukwakha apho ungakwazi ukuthatha singene uhambo.
Enye inzuzo ukudlala hayibo kukuba kulula ukufunda, incazelo nkqu mafikizolo Ungayithatha ngokukhawuleza ukusetyenziswa njengendlela bedibana nabantu abatsha. Izikolo ikhadi kwi Partypoker ukunika izifundo kwi Texas Holdem ngokuba abo kungabikho amava kunye umdlalo.
Bonke kufuneka ngoku kukufumana indawo yokungcakaza, apho kukho yendyebo ihlabathi lonke idini ithuba ukusebenzisana nabantu abangabazi, nje abahambi kodwa abantu bendawo nabakwamanye.
'Ingxenye fun siya khona'; zingaphi izihlandlo oye weva ukuba uhambo olude? Xa useluhambeni yedwa, ukuze nje ube echanekileyo.
Kukhona ezinye uhambo ngololiwe emangalisayo ukuba kuthathwe kulo lonke elaseYurophu, edlula kwezinye iindawo ezintle ilizwekazi has ukunikela. Xa wena kuloliwe, nabanye abantu abafana-nye kusenokwenzeka ukuba babe lapho.
Yindlela enkulu ukuhlangabezana abantu kwiinkalo zonke zobomi, balapha zokuhamba ukuya nokubuya emsebenzini, nabanye abahambi on adventure zabo mhlawumbi nokuba umntu ekugqibeleni ukwabelana ezinye amava wakho.
Umdlalo njenge kakhulu utsalo lwezotyelelo kwezi ntsuku njengoko yinto ukuba balapha ukuba sibe. Nokuba uhambo lemidlalo okanye ithuba lokuba athathe inxaxheba mcimbi, yindlela enkulu wokwenza wena inkcubeko ndawo.
Mhlawumbi sithathe inxaxheba kumdlalo weqakamba apha Asia, okanye ukujonga ukuba ukulandela ilizwe lakho ngeenxa Euro 2020 leyo Sky Sports ucacisa kungenxa ukuthatha indawo kwizixeko ezahlukahlukeneyo malunga Europe. Nazi amawaka izenzakalo kwihlabathi liphela yonke imihla ezifundisa ithuba ukuhlangabezana abantu abatsha kuhambo lwakho.
Ngaba ukulungele nabahlobo zokuhamba Make kwiindawo ezintsha engaqhelekanga zehlabathi? Gcina A Isitimela kukunceda Incwadi A Ukuqeqesha lula yaye kubize.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “10 Uninzi Iidolophu Beautiful Mandulo EYurophu” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/how-to-make-friends-in-strange-new-parts-of-the-world/ – (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha iilwimi / nl ukuba / fr okanye / de yaye ngaphezulu.
#abahlobo #ukuhamba umhlaba strangeplaces traveltips
NguWilliam Cartwright ke umbhali abazisebenzelayo kunye globetrotter othe wanikezela ubomi bakhe ukutyelela iindawo ezintsha bedibana nabantu abatsha. njengokuba uye (ikakhulu) solo umhambi uyasiqonda ubunzima yokuba kwilizwe elitsha kwaye engazi mntu. Enethemba lokuba amanqaku zakhe uya kunika iingcebiso ezilungileyo ngendlela ukusinda njenge Explorer solo kunye nabo ayehamba nabo. Xa akayi isaphonononga amazwe ezintsha Lifunyenwe ekhaya kunye neengcinga incwadi umdla malunga uhambo lwakhe olulandelayo. - Unako cofa apha ukuze Qhagamshelana nam